Imibandela Yokusebenzisa Inqubomgomo Yobumfihlo Imigomo yokusetshenziswa kweKhanseli yeCannabis
IStalas, LLC. Imigomo Yokusebenzisa
Iqale ukusebenza ngoJulayi 11, 2018
Ukuze kube lula kuwe, uStumari unikeza lesi sifinyeto semigomo yethu yokusetshenziswa ngendlela efingqiwe engabophi kanye nemigomo yokusebenzisa ngokugcwele ebopha ngokomthetho ngokulandela le Migomo Yokusebenzisa. Sicela uqonde ukuthi lolu akusilo uhlaka oluphelele lweMigomo Yokusebenzisa i-Stumari; ukubuka kuqala amalungelo abalulekile womsebenzisi nezibopho. Sicela ufunde yonke imibhalo yokusebenzisa ngokucophelela. Ngaphezu kwalokho, sicela wazi ukuthi ngokungena noma ngokusebenzisa noma iyiphi ingxenye yale webhusayithi ye-Stumari, uyavuma ukuboshwa yiMigomo yethu Yokusetshenziswa ephelele ebekwe ngokushesha ngemuva kweMigomo Yokusetshenziswa. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yemigomo yethu ephelele yokusetshenziswa, ungahle ungafinyeleli kuwebhusayithi yakwaStumari noma usebenzise noma yiziphi izinsizakalo zethu.
I-Stumari inikeza isigcawu sokusebenzisana nokuxhumana phakathi kwabasebenza ngezomthetho ("Abasebenzisi Abacebisayo") nabasebenzisi abafuna usizo lwezomthetho. ("Abathengi Bezomthetho"). I-Stumari akuyona inkampani yezomthetho, eyokudluliswa kwabameli noma i-ejensi yokuqashwa, futhi ayiqinisekisi imiphumela. Uyacelwa ukuthi usebenzise uStumari ngokuzibophezela futhi sicela ufunde kabanzi mayelana nensizakalo yethu eSigabeni 2 ngezansi.
Unesibopho sokuphepha kwe-akhawunti yakho, nakuyo yonke imisebenzi eyenzekayo ngaphansi kwe-akhawunti yakho. Uyacelwa ukuthi ufunde kabanzi mayelana nezibopho zabasebenzisi eSigabeni 3 ngezansi.
Ukuziphatha okuthile, njengokusebenzisa insiza umsebenzi ongekho emthethweni, akuvunyelwe ku-Stumari. Uyacelwa ukuthi ufunde kabanzi ngokuziphatha kwabasebenzisi eSigabeni 4 ngezansi.
Okuqukethwe, okufana nokusongela okuthunyelwe noma okuqukethwe okwephula amalungelo obunikazi beqembu, akuvunyelwe ku-Stumari. I-Stumari inelungelo lokususa okuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi okwephula izinqubomgomo zethu. Sicela ufunde kabanzi mayelana nokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi eSigabeni 5 ngezansi.
Amagama athile akhethekile alawula Abasebenzisi bakaSlzana. Ngokwesibonelo:
Abasebenzisi Abacebisanayo ababona abasebenzi noma ama-ejenti weStumari.
Abukho ubudlelwane bommeli-weklayenti owakhiwa noStzera, futhi akukho msebenzi wokugcina izimfihlo, ngokusetshenziswa kweStalas Website, okubandakanya ukuthumela imisebenzi.
Ubudlelwano bommeli-weklayenti bungakhiwa ngokusebenzisa insizakalo phakathi Kwabathengi Abezomthetho kanye Nabaxhasi Abasebenzisi.
Abasebenzisi Abacebile banesibopho sokuqikelela ukuthi noma yiluphi ulwazi, imininingwane, noma izikhangiso abazithumela kuwebhusayithi yeStumari zihambisana nayo yonke imithetho esetshenziswayo nemithetho yokuziphatha okuhle.
I-Stumari ayenzi noma yiluphi uhlobo lwesiqinisekiso ngekhono elingokomthetho, ikhono, noma ikhwalithi Yabasebenzisi Abacebile abangafakwa kuWebhusayithi yethu
Abasebenzisi Abacebile bakhululekile ukudala futhi balondoloze iphrofayli kuwebhusayithi yeStumari. Ngenkathi uStumari enza imizamo efanelekile yokuhweba ukuze aqinisekise ilayisense Lomsebenzisi Wokusebenzelana nokwenza umthetho, uStumari akachazi izethulo mayelana nesizinda noma iziqu zoMsebenzeli.
Umsebenzisi Wokubonisana angaba "Umsebenzisi Oqinisekisiwe Wokubonisana" ngokuhlinzeka uStraine ngokuqinisekisa okwengeziwe ukuthi ungummeli osebenzayo, onelayisense futhi usesimweni esihle sokusebenza ngokomthetho. Abasebenzisi Abaqinisekisiwe Bokubonisana nabo bangakhokha imali yokuthola izinsizakalo ezengeziwe zeStage namathuluzi okuphatha ukuzijayeza. I-Stumari ayikhuthazi noma incoma Abasebenzisi Bokubonisana futhi kungumsebenzi weKhasimende Lezomthetho ukuthatha izinyathelo zokuqapha ngaphambi kokuqasha Umsebenzisi Wokubonisana ngomsebenzi wezomthetho.
Akunazindleko kubathengi bezomthetho ukuthumela isicelo somsebenzi ku-Stumari noma usebenzise noma yimaphi amathuluzi noma amadokhumenti online we-Stumari. Imali yokusebenzisa noma yokucubungula (isib. Imali yekhadi lesikweletu) ingasebenza kuma-invoice akhokhwe nge-Stumari.
Uyacelwa ukuthi ufunde kabanzi mayelana nabasebenzisi boMcebisi eSigabeni 6 ngezansi.
Abakwa-Stumari bahambisana nezinsizakalo zokuphephile ze-Digital Millenium Copyright Act. Uma ukholelwa ukuthi izinto ezisetshenziswayo noma ezixhunywe yi-Stumari zephula i-copyright yakho, ugqugquzelwa ukuthi wazise uStaziwe ngokuhambisana nenqubomgomo ye-Stumari's Digital Millenium Copyright Act. Uyacelwa ukuthi ufunde kabanzi mayelana neNqubomgomo ye-DMCA ye-Stumari eSigabeni 8 ngezansi.
I-Stumari ingakuthumela i-imeyili njengengxenye yenkonzo yayo. Ungakhetha ukuphuma ezokuxhumana nge-imeyili. Uyacelwa ukuthi ufunde kabanzi ngokuxhumana nge-imeyili kusigaba 10 ngezansi.
I-Stumari ingaguqula la magama nganoma yisiphi isikhathi. Kodwa-ke, uStazela uzokwazisa ngoshintsho lwezinto ezibonakalayo kumigomo ngokuthumela isaziso ekhasini eliyikhaya laso kanye / noma ngokuthumela i-imeyili ekhelini le-imeyili olinikeze uStumari lapho usubhaliswa. Uyacelwa ukuthi ufunde kabanzi mayelana nokuguqulwa kwale migomo yokusetshenziswa eSigabeni 17 ngezansi.
Sicela ubheke Inqubomgomo Yobumfihlo Ye-Stumari ukuthola imininingwane engaphezulu ngamalungelo abasebenzisi ku-Stumari.
Sicela ubheke imigomo ephelele ukuthola eminye imininingwane.
Siyabonga ngokukhetha i-Stumari njengesiqalo sesipiliyoni sakho sezomthetho. Imigomo yokusebenzisa elandelayo ilawula konke ukusetshenziswa kwesevisi ngewebhusayithi etholakala ku-https: //www.Stumari.co nakho konke okuqukethwe, izinsizakalo, kanye nemikhiqizo etholakala kwiWebhusayithi noma ngeWebhusayithi. Siyaqonda ukuthi ukufunda imigomo yezivumelwano Zokusebenzisa kuyinto engumsebenzi kodwa sicela usifunde ngokucophelela lesi sivumelwano ngaphambi kokusebenzisa Iwebhusayithi yeStumari. Ixoxa ngemvelo yensizakalo kaStumari; imithetho uStumari elindele ukuthi abasebenzisi bayilandele kwiWebhusayithi yethu kanye nensizakalo yayo; ubudlelwano obuphakathi kukaStumari, abasebenzisi bethu, nabasebenzisi bethu bokubonisana; nemininingwane esemthethweni elawula le mithetho nobudlelwano. Ngoba yisivumelwano esibaluleke kangaka phakathi kwethu nawe, abasebenzisi bethu, sizamile ukulenza licace futhi lisebenziseke kalula abasebenzisi ngangokunokwenzeka.
Ngokufinyelela noma ukusebenzisa noma iyiphi ingxenye yeWebhusayithi, uyavuma ukuboshwa yimigomo nemibandela yalesi sivumelwano. Uma ungavumelani nayo yonke imigomo nemibandela yalesi sivumelwano, ngakho-ke awunakufinyelela kwiwebhusayithi noma usebenzise noma yiziphi izinsizakalo zethu. Iwebhusayithi itholakala kuphela kubantu okungenani abaneminyaka eyi-18.
Imibandela yokusetshenziswa kweStage
Izincazelo. Amagama alandelayo asetshenziswa kuyo yonke le Migomo yokusetshenziswa futhi anencazelo ethile. Kufanele wazi ukuthi ligama ngalinye lisho ukuthini.
Igama elithi "Service" lisho izinsizakalo ezinikezwe yi-Stikira, kubandakanya ngaphandle kokukhawulela umphakathi we-inthanethi weStzera; amathuluzi okuxhumana; ukuphathwa kwamadokhumenti nezixazululo zokugcina; nezinsizakalo zokukhokha. I-Stumari ayinikezeli inkonzo yokudluliselwa kwabameli noma isebenze njenge-ejensi yokuqashwa. Sinikeza indawo yabasebenzisi bethu ukuthi bahlangane futhi bashintshisane ngolwazi nabasebenzisi bethu be-Consultant.
Igama elithi "Isivumelwano" (elingase futhi libhekiswe lapha njengoba le "migomo yokusetshenziswa") libhekisa, ngokuhlanganyela, kuyo yonke imigomo, imibandela, nezaziso eziqukethwe noma kubhekiselwe kuzo kulo mbhalo.
I- “Webhusayithi” isho iwebhusayithi ye-Stumari etholakala ku-https: //www.Stumari.com, konke okufakiwe neziqongo, nakho konke okuqukethwe, izinsizakalo, kanye nemikhiqizo etholakala kwiWebhusayithi noma ngeWebhusayithi.
I-"Stumari," "We," nethi "Us" ibhekisa kuStumari, Inc., nakwabasebenzisana nathi, abaqondisi, abaxhasi, izikhulu kanye nabasebenzi. Abasebenzisi Abacebisanayo abayona ingxenye yeStage.
“Umsebenzisi,” “Wena” kanye no- “Wakho” kubhekiswa kumuntu, inkampani, noma inhlangano evakashele noma esebenzisa iWebhusayithi kanye / noma Insizakalo. Umsebenzisi angaba Yiklayenti Lezomthetho, Umsebenzisi Wokubonisana, bobabili, noma cha.
“Abasebenzisi Ababizi” babhekisa kubasebenzisi ababhalisile ababhalisile emkhakheni wezomthetho abangakwazi ukuxhumana futhi banikeze umsebenzi wokuthola izinkontileka noma wokubonisana kubathengi bezomthetho noma kubasebenzisi abasebenza nabo ngokubonisana nabo ngeSevisi. Abasebenzisi Abacebisanayo ababona abasebenzi noma ama-ejenti weStumari. Uyacelwa ukuthi ubheke iSigaba 6 salesi Sivumelwano ngolwazi oluthe xaxa maqondana nabasebenzisi beSazi.
“Abathengi Bezomthetho” babhekisa ku-1) Abasebenzisi abahambisa izicelo zeziphakamiso ezivela Kubasebenzisi Abasizi Bokuhlinzeka ngezinsizakalo zezomthetho ngemali ekhokhwayo (“Imisebenzi”); kanye 2) Abasebenzisi abanenkontileka Nabasebenzisi Abacebile ukuthola umsebenzi owengeziwe, ongathi, ngezinjongo zeSigaba 7 ngezansi, bangafaka ukuqashwa okuhlala njalo, ngale kwalokho obekusetshenzelwa yiJobe kokuqala obekusungule ubudlelwano beKhasimende loMxhasi. Abasebenzisi Ababizi bangahambisa iziphakamiso (“Amabhidi”) ale Misebenzi futhi bangase futhi basungule imigomo yobudlelwano neKhasimende Lezomthetho ngencwadi esayiniwe yokubandakanya noma esinye isivumelwano esibhaliwe. Uyacelwa ukuthi ubheke iSigaba 6 (b) ukuthola eminye imininingwane mayelana neMisebenzi, amaBids, kanye nabathengi bezomthetho
"Okuqukethwe" kubhekiselwe kokuqukethwe okufakwe noma kuboniswe kwiwebhusayithi, kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo, amadokhumenti, imininingwane, idatha, izindatshana, imibono, izithombe, izithombe, ihluzo, isofthiwe, izinhlelo, ukuqoshwa kwevidiyo, ukuqoshwa komsindo, imisindo, ukwakheka, izici, nezinye izinto ezitholakala kuwebhusayithi. Okuqukethwe kufaka, ngaphandle komkhawulo, Okuqukethwe Kwenziwe Ngumsebenzisi, okungathunyelwa yinoma yimuphi umsebenzisi weStumari (Umthengi Wezomthetho noma Umsebenzisi Wokubonisana).
Mayelana nensizakalo yeStage.
Insizakalo yeStalas iyipulatifomu yokusebenzisana nokuxhumana phakathi kwabasebenza ngezomthetho nalabo abafuna usizo lwezomthetho. Insizakalo yeStalas inikezela ukufinyelela kumphakathi we-Statula wabasebenzisi abangochwepheshe abaqeqeshiwe; ukusebenzisana okulula ngamathuluzi wokuphatha ukuxhumana kweStumari; ukuphathwa kwemibhalo nokulondolozwa; namathuluzi alula, wokukhokha okuvikelekile nawokubuyisa.
I-Stumari Ayisiyoqina Lomthetho. I-Stumari ayinikezi ukumelwa okusemthethweni. I-Stumari ayinikezeli nganoma yisiphi isiluleko sezomthetho, imibono yezomthetho, izincomo, ukudluliselwa, noma ukwelulekwa. Abasebenzisi Abacebisanayo ababona abasebenzi noma ama-ejenti weStumari. I-Stumari ayibandakanyi ezivumelwaneni phakathi kwabasebenzisi noma ukumelwa kwabasebenzisi. Akunakuphikwa ukuthi iStumari iboshelwe ngezenzo noma okuyekisiwe kwanoma imuphi uMsebenzisi Wokubonisana okwenzela izinsiza zokubonisana.
I-Stumari Ayisiyo Insizakalo Yokudluliselwa Kwommeli noma I-Ejensi Yokuqashwa. I-Stumari akuyona insizakalo yokudluliselwa kwabameli noma i-ejensi yokuqashwa. I-Stumari ayikhethi noma ivume noma yimuphi uMsebenzisi Wokubonisana ngamunye ukusekela iKlayenti Lezomthetho. Ngenkathi uStumari esebenzisa imizamo efanelekile yokuhweba ukuze aqinisekise ukuthi Abasebenzisi Ababhalisile Ababhalisile banamalayisense, asenzi siqinisekiso, isiqinisekiso, noma ukumelwa ngekhono lomthetho, ikhono, ikhwalithi, noma iziqu zanoma yimuphi Umsebenzisi Wokubonisana. I-Stumari ayigunyazi noma iqinisekise ukuthi Abasebenzisi Abacebile bembozwe umshuwalense wesikweletu ochwepheshe. I-Stumari ikhuthaza Amakhasimende Ezomthetho ukuthi acwaninge noma yimuphi uMsebenzisi oSebenzayo ngaphambi kokwamukela izeluleko zochwepheshe.
I-Stumari ayigcini ngabasebenzisi bayo. I-Stumari imane inikeze isiteji lapho abafuna usizo lwezomthetho bangaxhumana futhi basebenzisane nabezomthetho. I-Stumari ayikhuthazi noma iyiphi yabasebenzisi bayo Abacebisi futhi ayizitatimende ezethulwe ngabasebenzisi beTechnoation epulatifomu. I-Stumari ayivezi izethulo eziphathelene neziqu zabanikezeli bezinsizakalo zomthetho ezingezona abameli.
I-Stumari Ayisiqinisekisi Imiphumela. Izikhathi ezithile, Abathengi bezomthetho bangahambisa ukubuyekezwa Kwabasebenzisi Abacebile; lokhu kubuyekezwa akusona isiqinisekiso, iwaranti, noma isibikezeli maqondana nomphumela wanoma iyiphi udaba olusemthethweni oluzayo. Abakwa-Stumari ngeke babe nesibopho noma isikweletu sanoma yiluphi uhlobo lokuqukethwe Okukhiqizwe Umsebenzisi noma izeluleko zomthetho ohlangana nazo ngeWebhusayithi, futhi noma yikuphi ukusetshenziswa noma ukuthembela kokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi noma izeluleko zomthetho kusengozini yakho kuphela.
Ukusetshenziswa kwe-Stumari akwenzi Ubuhlobo Bommeli-weklayenti Nge-Stumari. I-Stumari ayinikezi izeluleko noma izinsiza ezingokomthetho. Noma yikuphi ukusetshenziswa kwe-Stumari Service akuhloselwe, futhi akwenzi, ukudala ubuhlobo bommeli-weklayenti. Noma yikuphi ukuxhumana nge-Stumari kungenzeka kungabi yimfihlo. I-Stumari ayikweleteki ngezenzo noma okuyekisiwe kwanoma imuphi umsebenzi we-Consultant User owenzela wena.
Izibopho Zomsebenzisi. Wena, wedwa, unesibopho se-akhawunti yakho nanoma yini eyenzekayo ngenkathi ungene ngemvume noma usebenzisa i-akhawunti yakho. Ukuphepha kwakho kungumsebenzi wakho.
Ukuphepha Kwe-Akhawunti Yomsebenzisi. Uma ubhalisela i-Service, uzokwakha i-akhawunti eqondene nomuntu uqobo efaka igama lomsebenzisi elihlukile nephasiwedi yokufinyelela ku-Service futhi uthole imiyalezo evela ku-Stumari. Unesibopho sokugcina ukuphepha kwe-akhawunti yakho, futhi unesibopho ngokuphelele sayo yonke imisebenzi eyenzeka ngaphansi kwe-akhawunti kanye nezinye izenzo ezenziwa maqondana ne-akhawunti. Uyavuma ukwazisa uStumari ngokushesha nganoma yikuphi ukusetshenziswa kwe-akhawunti okungagunyaziwe, noma yikuphi okunye ukwephulwa kwezokuphepha. Ngeke sizibophezele kunoma yiziphi izikweletu, ukulahleka, noma ukulimala okuvela ekusebenziseni okungagunyaziwe kwekhompyutha yakho, idivaysi ephathekayo, noma enye insimbi yekhompyutha kanye / noma i-akhawunti. '
Ubudlelwano nabasebenzisi boMcebisi. Ngoba asikwazi ukuqinisekisa ukuqina kwanoma ibaphi Abasebenzisi Bethu Bezeluleko ngezidingo zakho ezithile, sigqugquzela Abathengi Bezomthetho ukuthi bacwaninge noma yimuphi Umsebenzisi Wokubonisana ngaphambi kokuvuma izeluleko zomsebenzi. Abathengi bezomthetho bangahle bacele nesivumelwano esibhaliwe sokubandakanywa kwezomthetho esichaza imigomo, ubukhulu, imikhawulo, kanye nemibandela yokumelwa.
Akukho ukuthembela kokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi. Okuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi okuthunyelwe kwiWebhusayithi, njengokuthunyelwe kwebhulogi, kuhlinzekelwa imininingwane kuphela, ngaphandle kwesiqinisekiso sokuthi okuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi kuyiqiniso, kulungile noma kunembile. Okuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi akuyona indawo yezeluleko zomthetho eziqeqeshiwe noma ukucela ukunikela ngezeluleko zomthetho maqondana namaqiniso athile. Akumele uyephuze noma ufune usizo ngaphambi kokufuna izeluleko zomthetho noma ungazinaki izeluleko zomthetho ezihlobene nokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi. Ukubambezela ekufuneni izeluleko ezinjalo ezingokomthetho kungaholela ekunqandeni kwanoma yiziphi izimangalo onazo onazo, ngokuya ngesibalo (s) sokukhawulelwa esifanele. Okuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi akulawulwa yinoma yibuphi umbuso noma inhlangano kazwelonke yebha.
Ukuhambisana Nemithetho. Umela futhi uqinisekisa ukuthi: (i) unegunya lokugunyaza, futhi uneminyaka yobudala esemthethweni emthethweni wakho wokuzibopha kulesi Sivumelwano; (ii) ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo kuzoba ngezinhloso ezivunyelwe ngalesi Sivumelwano; (iii) ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo ngeke kwephule noma kuxhaphaze amalungelo obunikazi bempahla yanoma yimuphi umuntu wesithathu; futhi (iv) ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo kuzohambisana nayo yonke imithetho yasekhaya, yezwe nelez federal, imithetho, kanye nemigomo, nazo zonke ezinye izinqubomgomo zeStage.
Ukusetshenziswa Nokuziphatha Imikhawulo. Uvunyelwe ukusebenzisa insiza inqobo nje uma ulandela imithetho eyisisekelo embalwa. Imikhawulo elandelayo yokusebenzisa nokuvinjezelwa kokuziphatha yilezi zimiso eziyisisekelo esilindele ukuthi abasebenzisi bazilandele ngenkathi besebenzisa Insiza. Asinankinga nokuqukethwe abasebenzisi bethu abathumela, futhi sinelungelo lokuvala ama-akhawunti uma kudingeka.
Okuqukethwe Okuvinjelwe. Uyavuma ukuthi ngaphansi kwanoma yiziphi izimo ngeke udlulise noma yikuphi okuqukethwe (kufaka phakathi isoftware, umbhalo, izithombe, noma olunye ulwazi) lokho
akukho emthethweni noma kukhuthaza imisebenzi engekho emthethweni
ahlukumeza, ahlukumeza, ahlukumeza, asongela noma abhebhezela udlame olubhekiswe komunye umuntu noma iqembu
iii. ngocansi, ubandlululo, noma ngenye indlela ihlukumeza noma isabise umuntu noma iqembu ngesisekelo senkolo, ubulili, ukuthambekela kobulili, ubuhlanga, ubuzwe, ubudala, noma ukukhubazeka
ugaxekile, wenziwe ngomshini- noma owenziwe ngezikhathi ezithile, wenza ukukhangisa okungagunyaziwe noma okungacelwanga, izinhlamvu zamaketanga, noma yiluphi olunye uhlobo lokucela okungagunyaziwe, noma yiluphi uhlobo lottery noma ukugembula;
iqukethe noma ifaka noma yimaphi amagciwane, izibungu, i-malware, amahhashi weTrojan, noma okunye okuqukethwe okwenzelwe noma okuhloselwe ukuphazamisa, ukulimaza, noma ukukhawula ukusebenza kwanoma iyiphi isoftware, i-Hardware, noma izinto zokuxhumana noma ukonakalisa noma ukuthola ukufinyelela okungagunyaziwe kunoma iyiphi idatha eminye imininingwane yanoma yimuphi umuntu wesithathu;
ukwephula noma yiliphi ilungelo lokuphathelene nanoma yiliphi iqembu, kufaka phakathi ilungelo lobunikazi, uphawu lwentengiso, imfihlo yokuhweba, ilungelo lobunikazi, noma ilungelo lomphakathi
vii. zilingisa noma imuphi umuntu noma inhlangano, kufaka phakathi noma yimuphi wabasebenzi noma abamele; noma
viii. yephula ubumfihlo banoma yimuphi umuntu wesithathu.
Abasebenzisi Kufanele Bangaphezu kweminyaka yobudala engu-18. Umele ukuthi ungaphezulu kweminyaka engu-18. I-Stumari ayigxile kokuqukethwe kwethu ezinganeni noma kwintsha eneminyaka engaphansi kwengu-18, futhi asivumeli noma yibaphi Abasebenzisi abangaphansi kweminyaka engu-18 Kwinsizakalo yethu. Uma sifunda nganoma yimuphi uMsebenzisi ongaphansi kweminyaka engu-18, sizoyinqamula ngokushesha i-akhawunti Yomsebenzisi.
Akunasibopho Sokusebenzelana Komsebenzisi; I-Stumari May Monitor Ukusebenzelana. Noma yisiphi isikweletu, ukulahleka noma ukulimala okwenzeka ngenxa yanoma ikuphi ukusebenzelana koMsebenzisi, kufaka, ngaphandle komkhawulo, okuthunyelwe kukaJobe, okufaka noma ukwamukela ngokusebenzisa kwakho Insizakalo kungumthwalo wakho wemfanelo. Ngokubona kwethu, thina, noma ubuchwepheshe esibasebenzisayo, singabheka futhi / noma siqophe ukusebenzisana kwakho okujwayelekile nesevisi, kepha hhayi okucacisiwe kokusebenzisana kwakho okusemthethweni.
Kwesokudla Ukuqeda Ama-Akhawunti. Sinelungelo (yize kungenasibopho) lokho, ngokubona kwethu kuphela, sinqume ukuthi noma yikuphi ukuziphatha koMsebenzisi kufanelekile futhi kuyahambisana nalemigomo yokusebenzisa, noma kunqume noma kunqabe ukufinyelela nokusetshenziswa kwensizakalo kunoma yimuphi umsebenzisi isizathu, ngesaziso sangaphambilini noma ngaphandle kwesaziso.
Okuqukethwe okwenziwe ngabasebenzisi. Ungumnikazi wokuqukethwe kwakho, kepha usivumela amalungelo athile, ukuze sikwazi ukubonisa futhi sabelane ngokuqukethwe okuthumela. Sinelungelo lokususa okuqukethwe uma kudingeka.
Isibopho sokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi. Ungadala okuqukethwe, okubhaliwe noma okunye, ngenkathi usebenzisa Insizakalo ("Okuqukethwe Kwenziwe ngabasebenzisi"). Unesibopho sokuqukethwe kwakho, futhi noma yikuphi ukulimala okuvela,, noma yikuphi okuqukethwe Okhiqizwe Umsebenzisi okuthumela, okukulayishayo, ukuxhumanisa noma okunye ukukwenza ngesevisi, noma ngabe kukuphi uhlobo lokuqukethwe. Noma yisiphi isikweletu, ukulahleka noma ukulimala okwenzeka ngenxa yokusebenzisa noma ikuphi okuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi okwenze ukuthi kutholakale noma ukufinyelela ngokusebenzisa kwakho isevisi kungumthwalo wakho wemfanelo. Asinankinga nganoma yikuphi ukuboniswa esidlangalaleni noma ukusetshenziswa kabi kokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi.
Kwesokudla Thumela. Umelele futhi uqinisekisa ukuthi unelungelo lokuthumela konke okuqukethwe okukhishwe ngumsebenzisi okuhambisa. Ngokuqondile, uqinisekisa ukuthi uwalandele ngokuphelele noma yimaphi amalayisense avela eceleni aphathelene nokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi, futhi uthathe zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze udlule ukuze uqede abasebenzisi noma yimiphi imigomo edingekayo.
I-Stumari May Guqula noma Susa okuqukethwe. Sinelungelo (yize kungenasibopho) lokho, ngokubona kwethu kuphela, ukunquma ukuthi noma yikuphi okuqukethwe okuKhiqizwe Umsebenzisi kufanelekile noma kuyahambisana nalemigomo yokusetshenziswa, noma ukwenqaba noma ukususa noma yikuphi okuqukethwe okukhiqizwe ngabasebenzisi lokho, ngombono wethu ofanele , yephula noma iyiphi inqubomgomo ye-Stumari noma nganoma iyiphi indlela iyalimaza, ayifaneleki, noma iphikisana. Abakwa-Stumari baphinde balondoloze ilungelo lokwenza ukufomatha nokuhlela futhi bashintshe indlela noma ikuphi okuqukethwe okuKhiqizwe Umsebenzisi kuboniswa kwiWebhusayithi.
Ubunikazi bokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi. Ngaphandle kokuqukethwe okuvela kwa-Stumari, asifuni ubunikazi banoma yikuphi okuqukethwe okudluliswayo, okugcinwe, noma okucutshungulwe ku-akhawunti yakho. Ugcina bonke ubunikazi, bokulawula, nesibopho sokuqukethwe Okukhiqizwe Umsebenzisi okukuthumela. Ungahle ulawule ukufinyelela kokuqukethwe Okukhiqizwe Umsebenzisi ngokusebenzisa izilungiselelo eziku-akhawunti yakho yomsebenzisi.
Isibonelelo selayisense. Ngokuthembekile ukuvumela i-Stumari ukuthi isebenzise okuqukethwe okufaka ku-Service ngokunengqondo ngaphandle kokuphula noma yimaphi amalungelo onawo kuwo, usinikeza amalungelo alandelayo: ngokuthumela noma yikuphi okuqukethwe ngeWebhusayithi, unikeza ngokusobala uStumari kanye nabalandeli bethu umhlaba wonke, onganekayo, ogcwele Imalayisense ekhokhelwa futhi engenabukhosi, futhi engakhethi ukusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukubonisa, ukuguqula, ukuguqula, ukusabalalisa, nokwenza okuqukethwe okuhlobene nenhloso yebhizinisi likaStage. Le layisense ayiniki uStanka ilungelo lokuthengisa okuqukethwe okukhiqizwe ngabasebenzisi noma ukusabalalisa ngaphandle kweWebhusayithi yethu. Le layisensi izonqanyulwa ngesikhathi lapho okuqukethwe kususwa kuwebhusayithi.
Abasebenzisi Ababizi. Abasebenzisi Ababizi Abasebenza kwezomthetho abazimele abanikezela ukwenza izinsizakalo zokubonisana kwabathengi bezomthetho abazoba khona. Akuzona izisebenzi zakwaStage.
Abukho Ubudlelwano Bommeli-weklayenti Ngokusebenzisa Iwebhusayithi. Ukusetshenziswa kwewebhusayithi yeStumari kungenzeka kungabi nobudlelwano bommeli-wamakhasimende nabasebenzisi beSpecial. Imininingwane ethunyelwe noma yatholakala kwiWebhusayithi noma ngewebhusayithi, kufaka, ngaphandle komkhawulo, noma yiziphi izimpendulo kwimibuzo yezomthetho eposwe kuWebhusayithi; imininingwane kuzinkombandlela nemibhalo yeStumari; imininingwane ethunyelwe esidlangalaleni kwiWebhusayithi; noma imininingwane ethunyelwe kumyalezo ongacelwanga kuMsebenzisi ayihloselwe njengeseluleko sezomthetho, akuyona imfihlo, futhi ayakhi ubudlelwano bommeli nekhasimende. Kubhekwa njengokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi.
Ubudlelwano Bommeli-Amakhasimende Ngokusetshenziswa Kwensizakalo. Ubudlelwano bommeli-weklayenti bungenziwa ngokusetshenziswa kwensizakalo phakathi kwabasebenzisi nabasebenzisi bochwepheshe. Abathengi bezomthetho bangathumela imisebenzi ngensizakalo. Abasebenzisi Abacebile bangahambisa ama-Bids futhi baxoxisane ngemininingwane yale Misebenzi ngaphambi kokwemukelwa. Lapho sekwamukelwe, isilinganiso sokumelwa Komsebenzisi Osetshenziswelwe sinqunyelwe kuphela endabeni okuvunyelwene ngayo kwi-Ibhidi ngaphandle kokuthi Umthengi Wezomthetho kanye noMsebenzisi Wokubonisana abeke ngokusemthethweni ukuhleleka kwabo ngencwadi ebhalisiwe noma kwesinye isivumelwano esibhaliwe, lapho isivumelwano esisanda kubhalwa landela isiphakamiso esamukelwe ngaphambilini. Ibhidi akuyona indawo yokubonisana komuntu nomuntu noma ngocingo nommeli onelayisensi yokusebenzisa amandla akho mayelana nenkinga yakho ethile yezomthetho, futhi akufanele uthembele olwazini oluqukethwe yiBizo njengeseluleko sezomthetho. I-Stumari ithatha yonke imizamo efanelekile yokuqinisekisa ubumfihlo be-Bids neminye imilayezo yomuntu siqu ku-Service yethu, kepha ayinakuqinisekisa ubumfihlo. Ezokuxhumana ezidinga ubumfihlo kufanele zenzeke ngaphandle kweStage Service, okufana ngocingo.
Izibopho Zomsebenzisi. Abasebenzisi Abacebile banesibopho sokuqikelela ukuthi noma imiphi imininingwane, ukucela, noma izikhangiso abazithumela noma abazibeka kwiwebhusayithi, kubandakanya ngaphandle komkhawulo Okuqukethwe Kwenziwe ngabasebenzisi, kanye nanoma yikuphi ukuxhumana abangaba nakho namakhasimende abazoba ngeWebhusayithi noma Insizakalo, bahambisana ngokuphelele yonke imithetho esetshenziswayo nemithetho yokuziphatha okuhle, kufaka phakathi leyo ephathelene nokwenza okungagunyaziwe komthetho nalabo abalawula indlela, indlela noma okuqukethwe kokuxhumana namakhasimende, ukukhangisa, noma ezinye izindaba.
Ukukhokhwa Kwabasebenzisi Abacebile. Amagama athile athile alawula Abasebenzisi Bokubonisana kanye nokukhokha.
I-Stumari Ayilona Iqembu Lokuthola Izinkontileka. Abathengi bezomthetho bangenza inkontileka Nabasebenzisi Abacebile ngokuthumela nangokwamukela Imisebenzi. Izinkontileka ezinje ziphakathi koMthengi Wezomthetho noMsebenzisi Wokubonisana. Abakwa-Stumari ngeke babe yingxenye yanoma yiziphi izinkontileka zemisebenzi engeniswe ngeNkonzo yethu, ngaphandle kokuthi ithunyelwe yisikhulu sakwa-Stumari. I-Stumari isiza lezi zinkontileka ngokunikeza isiteji sokuphathwa kwezokuxhumana namathuluzi wokukhokha.
Zonke Izimali Zomthetho Zikhokhelwe Abasebenzisi Bokubonisana. I-Stumari ayinikezi izinsiza zomthetho futhi ayikhokhisi izinsiza zomthetho. Izinkokhelo ezenzelwa Abasebenzisi Abacebile ngokusebenzisa isiteji sokukhokhiswa kukaStumari zidluliselwa ngqo ku-akhawunti yokukhokha yoMsizi Wokubonisana, kunciphiswe noma iyiphi insizakalo ehlobene nezinsizakusebenza (isib. Izimali zamakhadi esikweletu).
iii. Abasebenzisi Ababonisanayo Bazothola Inkokhelo Ngesevisi Yakho Konke Ukuthengiselana Komsebenzisi. Abasebenzisi Ababonisanayo abathola Imisebenzi ngeNsizakalo bazothola inkokhelo ngensizakalo yakho konke okwenziwayo okuhlobene nalowo msebenzisi, kufaka phakathi ukuthengiselana okulandelayo okungahlobene neze nomsebenzi wokuqala. Uma iKlayenti Lezomthetho lingafuni noma lingakwazi ukukhokha nge-Stumari, Umsebenzisi Oxhumene Naye uyavuma ukwazisa uStumari nganoma yiluphi uhlelo olusha lokukhokha. Ukukhokhwa Kwezomthetho Klayenti Kokuxhumana Nomsebenzisi, okwenziwe ngaphandle kwesevisi ngaphandle kokuthola isaziso ku-Stumari, kukhishwa ngokuphelele kuzo zombili izinhlangothi zesiqinisekiso sokukhokha / sokuvikela izimpikiswano zikaStumari njengoba kuxoxwe ngazo ezigabeni 14 no-15 ngezansi, noma kungathiwa kuhlobene izinkokhelo ezenziwe ngaphakathi kwensizakalo.
Amakhodi Wokwenyusa kanye nama-Credits. I-Stumari, ngokubona kwayo kuphela, ingadala amakhodi wokuphromotha angahle akhishelwe isikweletu se-akhawunti, noma ezinye izici noma izinzuzo ezihlobene nezinsizakalo Zokusebenzisa Umhlinzeki, ngokuya ngemibandela elandelayo kanye nanoma yimiphi imigomo eyengeziwe emiswe iStumari ngesisekelo sekhodi yephromoshini ( "Amakhodi we-Promo"). Amagama athile athile alawula Abasebenzisi Bokubonisana kanye nokukhokha.
Ukusetshenziswa Kwamakhodi wePromo Akusho Ukuthi Ubudlelwano Bommeli-Amakhasimende. Ngezikhathi ezithile, Abathengi bezomthetho bangase bakwazi ukufinyelela kwizaphulelo ezihlinzekwa ngabakwaStanka, okuthi, ngakwenye, basebenzise imali ka-Stumari ukukhokhela ingxenye yemali ekhokhwa ngabathengi bezomthetho kubathengi abaqeqeshiwe. Ukusetshenziswa kwalamakhuphoni akusho ukuthi kukhona ubudlelwano bommeli-weklayenti phakathi kukaStanka nabasebenzisi bakwaSpecial lapho isigqebhezana sisetshenziselwa noma yiziphi izinkokhelo ezikhokhelwe ezivela kuMthengi Wezomthetho.
Amakhodi we-Promo kumele asetshenziswe ngababukeli bawo abahlosile, ngezinhloso zabo ezihlosiwe, nangokomthetho.
Amakhodi wephromo kungenzeka ukuthi aphindwe kabili, athengiswe noma adluliswe nganoma iyiphi indlela, noma anikezwe umphakathi wonkana (noma ngabe athunyelwe kwiforamu yomphakathi noma ngenye indlela), ngaphandle kokuthi kuvunyelwe ngokucacile yi-Stumari. Amakhodi we-Promo akanalo inani lemali futhi angaphelelwa yisikhathi noma akhutshazwe yi-Stumari nganoma yisiphi isikhathi, nganoma yisiphi isizathu, ngaphambi kokusebenzisa kwakho. AbakwaStumari banelungelo lokugodla noma ukukhipha amakhredithi noma ezinye izici noma izinzuzo ezitholwe ngokusebenzisa Amakhodi wePromo nguwe noma omunye umsebenzisi uma ngabe uStumari enquma noma ekholwa ukuthi ukusetshenziswa noma ukuhlengwa kwekhodi ye-Promo bekunephutha, inkohliso, akukho emthethweni, noma kwephula imigomo ye-Promo Code esebenzayo.
Izipesheli Zabasebenzisi Zokuqashwa Kwabasebenzisi Abasebenzisi.
7.1 Imali yokuphumelela yokuqashwa. Esimweni lapho uMsebenzisi Wokubonisana amukela khona umsebenzi (“Umsebenzi Ohlanganisiwe”) owenziwe ngumsebenzisi (ngamunye, “Umqashi Womsebenzisi”), kungakhathalekile isikhathi esinganqunyelwe noma esimisiwe, ngesikhathi noma phakathi nenkathi yezinyanga eziyishumi nesishiyagalombili (18) (leso sikhathi, "Isikhathi Esivaliwe Senkokhelo") ngemuva kokuthi Umsebenzisi Wokubonisana aqale umsebenzi wokuqala walowoMsebenzisi (ngamunye, “Umhlinzeki Ovundile”), kuzosebenza imigomo nemibandela elandelayo:
Umsebenzisi ngamunye Wokubonisana uvuma ukuthi (1) uma uthola u-Offer Offer, uzokwazisa ngokushesha uStumari ngosuku lwakho lokuqala lomsebenzi oqokiwe (“Usuku lokuqala”) kanye nemigomo esemqoka yalolo Ukunikezwa Kwesembozo (bese wazise uStumari ngokushesha ngokubhala kufanele Lowo Wusuku Lokuqala noma unikezela ngokushintshwa kwemigomo nganoma yisiphi isikhathi), (2) uzonikeza uStanka (a) ikhophi yoMhlinzeki Ovinjiwe ngokuphelele, noma (b) enze idokhumenti phakathi kwakho, uMqashi Womsebenzisi noStumari obeka impahla amagama okuqashwa, okubandakanya, phakathi kwezinye izinto, Usuku lokuqala kanye nesinxephezelo, ngokushesha lapho kusayinwa incwadi evunyelwe yokuqashwa phakathi kwakho noMsebenzisi Womqashi (“usuku olusebenzayo”), njengoba iceliwe ngu-Stumari, kanye (3) nawe uzokwazisa ngokushesha uStumari ngokubhala ngemuva kokunqanyulwa kokuqashwa kwakho njengomsebenzi uma (a) Umqashi eqasha umsebenzi wakho enqamula umsebenzi wakho owuvunyiwe ngokususelwa ekusebenzeni okungagculisi ngaphakathi kwezinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) ngosuku umsebenzi wakho owuthole ngalo uqalile, noma (b) uqeda ngokuzithandela ukuqasha Umsebenzi wakho Ohlanganisiwe kungakapheli izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) ngosuku uMsebenzi wakho Ovulekile oqale ngalo. Uma kwenzeka ukuthi ngaphambi kosuku lokuqala, wena noma uMqashi Womsebenzisi ukhethe ukungabuqali ubudlelwane bokuqashwa obuhlongozwe yi-Cold Offer, uzokwazisa ngokushesha uStumari ngokubhala.
Lapho Umsebenzisi Wokubonisana amukela Ukunikezwa Kwakho Okuvaliwe, uyavuma ukukhokha imali yempumelelo kwa-Stumari (lilinye, “Imali Yezimpumelelo”) elilingana namaphesenti alandelayo weholo loMsizi Wokubonisana osetshenziswe ku-Offer Offer (i-Consultant User's “Base Umholo ”), lelo nani okufanele likhokhwe bese lingaholelwa ngaphambi kwezinsuku ezingamashumi amathathu (30) emva kosuku lokuqala, kungenjalo ngokuhambisana nomusho wokuqala wesigaba 13.b. kanye neSigaba 13.d. ngalokhu:
Uma usuku lokuqalisa lwenzeka ngaphambi noma ngaphambi kwenombolo elandelayo yezinsuku ngemuva kokuqala kwephesenti lokuqala lomqashi womsebenzisi womsebenzisi womsebenzisi womsebenzi wephesenti
1-182 izinsuku 15%
Izinsuku ezingama-183-365 u-10%
Izinsuku ezingama-366-550 u-5%
Days izinsuku ezingama-551 0%
Ngokwamukela le migomo yokusebenzisa, uMsebenzisi woMqashi uvuma ukuthi uStanka ugunyazwe ukuthi akhokhe i-akhawunti yoMsizi Womqashi ngokushesha kuzo zonke Izimali Zempumelelo okufanele zikhokhwe kwa-Stumari lapha futhi ukuthi akukho saziso noma imvume eyengeziwe edingekayo.
7.2 Ukuhlinzekelwa Kwezimali Zokuphumelela.
Ngaphandle kwalokhu okwandulelayo, uma kuba nengxabano Yezimali Eziyimpumelelo, uma uMsebenzisi woMqashi engathola ukuthi uMsebenzisi woMqashi wayeneNqubo Esebenzayo (njengoba ichaziwe ngezansi) noMsebenzisi Wokubonisana ngaphambi kokusebenzisa Iwebhusayithi ka-Stumari kanye / noma Inkonzo (isib. Umsebenzisi Wokubonisana wayevele eqalile inqubo yokuxoxisana noMsebenzisi Womqashi futhi leyo nqubo yayinganqanyulwa, noma uMsebenzisi Womqashi esethole ukuphindisela Kwabasebenzisi Abathengi (i-ejensi) yokuqashwa noma i-headhunter futhi ebhekwe ngabasebenzisi bomqashi) oxolelwe ekukhokheleni Imali Yempumelelo. Kodwa-ke, ukuzimisela kokugcina kokuthi Imali Yempumelelo ikweletwa uMsebenzisi Womqashi kuMnikeli Ovunyelwewe kuyokwenzelwa yena kuphela nge-Stumari. Ngezinhloso zalokhu, "Inqubo esebenzayo" izosho ukuxhumana okuqhubekayo, okusebenzisanayo, esimweni sokuqasha noma ukuqasha okusebenzayo lapho isinqumo sokwetha ukhetho singazange senziwe, phakathi kwezinyanga ezintathu (3) ngaphambi kokusebenzisa Iwebhusayithi kanye / noma Izinsizakalo Zokusebenzisa Umsebenzisi okukhona ohlelweni lokulandela umfakisicelo loMqashi noma oluthunyelwe yi-ejensi yokuqasha.
UMA UNGUMSEBENZISI WEZIMPAHLA osebenzisa iWebhusayithi yethu kanye / noma Insizakalo, WAMUKELA lezi zinhlinzeko Zokukhokhelwa Kwempumelelo. Uma ungavumelani nanoma iyiphi yalezi zinhlinzeko, sicela unqamule i-akhawunti yakho ngokushesha futhi uyeke ukusebenzisa iWebhusayithi yethu Nezensizakalo UKUTHENGA KWAKHO KOKUKHOKHA IZIMALI ZONKE ZOKUFINYELELA KULULA KANYE NOKWENZA IMITHETHO YOKUSETSHENZISWA. Uma Umsebenzisi Womqashi evimba iSayithi lethu kanye / noma Izinsizakalo ngemuva kokuthola Umsebenzisi Wokubonisana ngeSayithi lethu kanye / noma Izinsizakalo futhi ngokuhamba kwesikhathi aqasha ukuthi Umsebenzisi Wokubonisana, uMsebenzisi Womqashi uzokhokhiswa imali yokuphumelela elingana no-25% we-Base Salary of the Consultant Umsebenzisi ne-Stumari kungenzeka, ngokubona kwabo kuphela, bangaqeda i-akhawunti yomqashi yomsebenzisi we-Stumari.
7.3 Ukubuyiselwa kwemali.
Uma (a) Umsebenzisi Wemisebenzi eqasha uMsebenzisi Wokuqashwa futhi enqanyula ukuqashwa koMsebenzisi ngokusekelwe ekusebenzeni okungagculisi zingakapheli izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) zoSuku lokuqala, (b) UmSebenzi oSebenzisa umsebenzi ngokuthanda unqamula umsebenzi wakhe kungakapheli izinsuku ezingamashumi ayisishiyagalolunye (90) Wosuku lokuqala, noma (c) UmSebenzisi Womsebenzisi akaqali ukuqashwa ngoba uMsebenzisi woMqashi noma uMsebenzisi Wokuqashwa ukhetha ukungabusi ubudlelwano bokuqashwa obuhlongozwe kwi-Cold Offer (ngakunye, “Umcimbi Wokunqanyulwa”), lapho sebetholile futhi beqinisekisiwe lolo lwazi, uStumari uzobuyisela ngokugcwele kuMqashi Womsebenzisi Imali Yezimpumelelo ehlobene nokupheliswa Komsebenzisi Ngolwazi.
Okuqukethwe kweThathu. Kungahle kube nokuqukethwe okuvela kubantu besithathu kuwebhusayithi yeStumari, okufana nokuthunyelwe kwamabhulogi okubhalwe abanye abasebenzisi noma izixhumanisi kwamanye amawebhusayithi. Ngoba asikwazi ukulawula lokho okuqukethwe, asinasibopho sokuqukethwe noma amawebhusayithi okuqukethwe okuqukethwe kungaxhumeka kukho.
Ukufinyelela kokuqukethwe kweqembu lesithathu. Ngokusebenzisa insizakalo, uzokwazi ukufinyelela kokuqukethwe okuvela noma kuvela kubantu besithathu ("Okuqukethwe Okwesithathu"). Ukusetshenziswa kwakho kwensizakalo yimvume ye-Stumari ukwethula lokhu okuqukethwe kuwe. Uvuma wonke umthwalo wemfanelo, futhi uthatha bonke ubungozi bakho, ngokuqukethwe kwakho kokuqukethwe komuntu wesithathu.
Akukho mthwalo wemfanelo kokuqukethwe kweqembu lesithathu. Njengengxenye yensizakalo, i-Stumari ingakunikeza izixhumanisi ezisebenziseka kalula kuwebhusayithi (yabantu) kanye nezinye izinhlobo zokuqukethwe kweqembu lesithathu. Lezi zixhumanisi zinikezwa njengokubonisa ababhalisile bensizakalo. Asinamandla okulawula amawebhusayithi wesithathu noma okuqukethwe noma ukukhushulwa, izinto zokwakha, imininingwane, izimpahla noma izinsiza ezitholakala kuzo. Ngokuxhumanisa nokuqukethwe okunjalo, asimele noma sisho ukuthi samukela noma sivumela, futhi asinasibopho sazo, ukunemba noma ukuthembeka kwanoma imuphi umbono, izeluleko, noma isitatimende esenziwe amaqembu ngaphandle kwe-Stumari. Asinankinga nganoma yikuphi okuqukethwe kweqembu lesithathu okutholakala ngewebhusayithi yethu. Uma uthatha isinqumo sokushiya Iwebhusayithi futhi ufinyelele kokuqukethwe kweqembu lesithathu, wenza lokho ngobungozi bakho futhi kufanele wazi ukuthi imigomo nezinqubomgomo zethu azisabusi. Kufanele ubuyekeze imigomo nezinqubomgomo ezisebenzayo, kufaka phakathi ubumfihlo kanye nemikhuba yokuqoqa idatha, yanoma yikuphi okuqukethwe okunjalo.
Akukho Ukugunyazwa Kokusebenzisa Okwesithathu Okuqukethwe. Lesi Sivumelwano asikugunyazi ukuthi usabalalise, ubonise esidlangalaleni, usebenze esidlangalaleni, wenze utholakale, uguqulwe, noma usebenzise okunye okuqukethwe kweqembu lesithathu ngaphandle kwemvume nemibandela yeStumari.
Ukuphulwa kwe-copyright nenqubomgomo ye-DMCA. Uma ukholelwa ukuthi impahla etholakala noma exhunywe yi-Stumari yephula i-copyright yakho, sicela wazise iStumari ngokuhambisana nenqubomgomo yethu ye-Digital Millenium Copyright Act.
Ukuqedwa Kwama-Akhawunti We-infringer. I-Stumari ihlonipha amalungelo obunikazi bempahla yabanye nezicelo ukuthi Abasebenzisi bethu benze okufanayo. Ngokulandela i-17 USC 512 (i) ye-United States Copyright Act, sizonqamula ukufinyelela koMsebenzisi nokusebenzisa Iwebhusayithi uma, ngaphansi kwezimo ezifanele, umsebenzisi azimisele ukuphinda aphule umthetho wokushicilela noma amanye amalungelo empahla yamalungelo kaStumari noma abanye. Singakunqamula ukufinyelela kwabahlanganyeli noma abasebenzisi abatholakala kaningi ukuhlinzeka noma ukuthumela okuvikelwe okuvela eceleni ngaphandle kwamalungelo nemvume edingekayo.
Izaziso ze-DMCA Thatha Phansi. Uma ungumnikazi we-copyright noma umenzeli womnikazi we-copyright futhi ukholwa, ngokweqiniso, ukuthi noma yiziphi izinto ezinikezwe ekuphulweni Kwezinsizakalo zifinyelela kumalungelo akho okushicilela, ungahambisa isaziso ngokulandela umthetho we-Digital Millenium Copyright Act (bona 17 USC 512) (“DMCA”) ngokuthumela isaziso sokubhala phansi esenziwe kahle ngokubhalela umgcinimagunya oqokwe ngelungelo lobunikazi we-Stumari eMakethe engu-580 St, # 500, San Francisco, CA 94104.
Ukuphendula kuzaziso ze-DMCA Thatha Phansi. Uma uStanka ethatha isinyathelo ngokuphendula isaziso sokwephulwa komthetho, kuzokwenza umzamo omuhle wokuxhumana nokuthintana neqembu elenzile lokho okuqukethwe kusetshenziswa ikheli le-imeyili lakamuva kakhulu, uma kukhona, elinikezwe yilelo qembu kuStumari. Noma yisiphi isaziso sokwephulwa kwe-DMCA singadluliselwa ephathini elenzile okuqukethwe kutholakale noma kwabanye abantu abanjengoChillEffects.org.
Izaziso Zokuphikisa. Uma ukholwa ukuthi okuqukethwe kwakho okwenziwe ngumsebenzisi okususiwe kwiwebhusayithi akuphuli umthetho, noma ukuthi unemvume evela kumnikazi we-copyright, umenzeli womnikazi we-copyright, noma ngokulandela umthetho, ukuthumela nokusebenzisa okuqukethwe okuthumele kwiWebhusayithi, ungathumela isaziso esiphikisiwe esime kahle kumenzeli we-copyright ka-Stumari usebenzisa imininingwane yokuxhumana ebekwe ngenhla.
Ukuphendula Izaziso Zokubamba ze-DMCA. Uma isaziso esiphikisayo samukelwa yi-ejenti ye-copyright ka-Stumari, uStazela angathumela ikhophi lesaziso esiphikisayo kwiqembu langempela elikhonondayo lazise lowo muntu ukuthi lingabuyisela okuqukethwe okususiwe ngezinsuku eziyi-10 zebhizinisi. Ngaphandle kokuthi umnikazi we-copyright afake isenzo esifuna umyalo wenkantolo ophikisana nomhlinzeki wokuqukethwe, ilungu noma umsebenzisi, okuqukethwe okususiwe kuzobuyiselwa kwiwebhusayithi ngezinsuku eziyi-10 kuye kwezili-14 ngemuva kokuthola isaziso esiphikisayo.
Isaziso Sempahla Yengqondo. I-Stumari igcina bonke ubunikazi bempahla yethu yobuhlakani, kufaka phakathi amalungelo okushicilela, amalungelo obunikazi, nezimpawu zethu zentengiso.
Akunakudlulisa. Abakwa-Stumari bagcina ubunikazi bawo wonke amalungelo obunikazi bempahla yanoma yiluphi uhlobo oluhlobene newebhusayithi kanye nensizakalo, kufaka phakathi amalungelo okushicilela asebenzayo, amalungelo obunikazi, uphawu lwentengiso namanye amalungelo okuphathelene. Ezinye izimpawu zokuthengisa, izimpawu zensiza, imidwebo kanye nama-logo asetshenziswa maqondana neWebhusayithi kanye nesevisi kungaba yizimpawu zokuthengisa zabanye abantu besithathu. Lesi Sivumelwano asidlulisi sisuka kuwe sisiya kunoma iyiphi impahla ye-Stumari noma yomuntu wesithathu, futhi konke, isihloko, nentshisekelo kuyo futhi kuleyo mpahla kuyohlala (njengokuphakathi kwamaqembu) nathi kuphela. Sigodla onke amalungelo esinganikwa wona ngokucacile ngaphansi kwalesi Sivumelwano.
Ngokuqondile, iStumari, iStumari.com, nazo zonke ezinye izinkomba ezivelayo, ziyakhonjiswa, noma zisetshenziswa kwiWebhusayithi noma njengengxenye yensizakalo zibhalisiwe noma zimpawu zomthetho ezijwayelekile noma izimpawu zensizakalo zakwa-Stumari, Inc. Lezi zimpawu zokuhweba kungenzeka zingakopishwa , okulandiwe, okukhiqizwe kabusha, okusetshenzisiwe, okuguquliwe, noma okusatshalaliswa nganoma iyiphi indlela ngaphandle kwemvume ebhaliwe evela kwa-Stumari, ngaphandle kwengxenye ebalulekile yanoma yiliphi ikhophi lokuqukethwe eligunyaziwe.
Ukuxhumana Nge-imeyili. Sisebenzisa i-imeyili nezindlela ze-elekhthronikhi zokuxhumana nabantu bethu.
Kudingeka Ukuxhumana Nge-elekthroniki. Ngezinhloso zenkontileka, (i) uyavuma ukuthola ukuxhumana okuvela kwa-Stumari kwifomu le-elekthronikhi ngekheli le-imeyili olithumele noma ngeSevisi; futhi (ii) vuma ukuthi yonke imigomo yokusebenzisa, izivumelwano, izaziso, ukudalulwa, kanye nokunye ukuxhumana okuhlinzekwa yi-Stumari kuwe nge-elekthronikhi noma yimiphi imfuneko yezomthetho leyo mibhalo ebingayanelisa uma ngabe ibhaliwe. Lesi sigaba asithinti amalungelo akho angaphendulwa.
Isaziso Sezomthetho Ukuze Stumari Kumelwe Kubhalwe. Ukuxhumana okwenziwe nge-imeyili noma ngohlelo lokuthumela imiyalezo eyimfihlo yeSevisi ngeke kube inothisi yezomthetho kuStumari noma kunoma yiziphi izikhulu zethu, abasebenzi, ama-ejenti noma abamele kunoma yisiphi isimo lapho isaziso kuStumari sidingeka yinkontileka noma yimuphi umthetho noma umthethonqubo.
Ukuqedwa. Ungasikhansela lesi Sivumelwano futhi uvale i-akhawunti yakho nganoma yisiphi isikhathi. Ukunqanyulwa kwensizakalo ye-Stumari akuqedi ubudlelwano babameli noma iklayenti.
Ungasinqamula Lesi Sivumelwano. Uma ufisa ukunqamula lesi Sivumelwano noma i-akhawunti yakho neNkonzo, ungavele uyeke ukusebenzisa iStumari. Uma ufisa ukususa idatha ye-akhawunti yakho yoMsebenzisi, sicela uthinte uStumari ku-info@Stumari.com. Sizogcina futhi sisebenzise imininingwane yakho njengoba kudingeka ukuhambisana nezibopho zethu zomthetho, sixazulule izingxabano, futhi sisebenzise izivumelwano zethu, kepha ukuvimbela izidingo zomthetho, sizosusa iphrofayela yakho ephelele kungakapheli izinsuku ezingama-30.
I-Stumari May Inqamula Lesi Sivumelwano. I-Stumari ingaqeda ukufinyelela kwakho kubo bonke noma iyiphi ingxenye yeWebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi, noma ngaphandle kwesizathu, noma ngaphandle kwesaziso, kusebenza ngokushesha.
Ubuhlobo obuphakathi Kwommeli Nokunqanyulwa Kweklayenti. Ukuqedwa kobudlelwano bakho ne-Stumari akubuthinti ubudlelwano bakho nanoma yimuphi umeluleki noma iklayenti oligcinile ngokusebenzisa iStumari Service. Yonke imisebenzi yezomthetho, yenkontileka kanye neyokuziphatha, izibopho kanye nezibopho zisinda ekuqedweni kobudlelwano bakwaStumari.
Okunye Ukuhlinzekwa Kusinda Ukuqedwa. Zonke izinhlinzeko zalesi Sivumelwano okufanele ngokwemvelo yazo ziphumelele ukunqanyulwa zizophila ngokunqanyulwa, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukunikezwa kobunikazi, izihlanganiso zewaranti, ukukhululwa kanye nemikhawulo yesikweletu.
Inqubo Yokukhokha. Inkokhelo izocutshungulwa njengoba kuchaziwe kusiphakamiso kanye / noma i-invoyisi futhi kuvunyelwane ngayo yiKlayenti Lezomthetho kanye Nomsebenzisi Obonisanayo. Lapho umsebenzi (noma ingxenye yawo njengoba kuvunyelwene ngaphambilini ngokubhala yiKlayenti Yezomthetho kanye Nomsebenzisi Obonisanayo) imakwa njengeqediwe nguMsebenzisi Oxhumene Naye, uStumari uzokwazisa iKlayenti Lezomthetho ukuthi lowo msebenzi (noma ingxenye yawo njengoba kuvunyelwene ngayo ngaphambili) ngokubhaliwe yiKlayenti Yezomthetho kanye Nomsebenzisi Obonisanayo) kuqediwe. IKlayenti Lezomthetho kufanele likhokhe inani okuvunyelwene ngalo noma licele izinguquko. Uma iKlayenti Lezomthetho lingathathanga sinyathelo ngemuva kwezinsuku eziyi-10, uStumari uzoba nelungelo lokukhokhisa ikhadi lesikweletu le-Legal Client, i-akhawunti yasebhange, noma i-akhawunti ye-PayPal ngenani eligcwele lemali okuvunyelwene ngayo noma i-invoyisi engenakuphikwa, kufaka phakathi insizakalo esebenzayo noma ukucubungula imali. I-Legal Client ingahambisa izingxabano ngokukhokha ku-info@Stumari.com inqobo nje uma inamathela kweminye imibandela ebekwe kusigaba 14 (Legal Client-Consultant User Dispute Resolution Procedures).
Isibopho sokukhokha. Unesibopho sayo yonke imali, kufaka phakathi izintela, insizakalo, kanye nemali yokufaka, ehlotshaniswa nokusebenzisa kwakho Insiza. Ngokusebenzisa Insizakalo, uyavuma ukukhokha uMsebenzisi obonisana nge-Stumari inani okuvunyelenwe ngalo kwi-Bhidi noma i-invoice engafakwanga, nezinsizakalo ezihambisanayo kanye nezimali zokulungisa, ngaphandle kokuthi uphikisana ne-invoice ngokuthumela i-imeyili ku-info@Stumari.com futhi unamathela kuya kweminye imibandela ebekwe eSigabeni 15 (Izinqubo Zezomthengi Zokuxazulula Amakhasimende Ezomthetho). Unesibopho sokusinikeza izindlela ezivumelekile zokukhokha.
Ukuzibophezela kukaStage. UStanka uyavuma ukukungenisa nge-invoyisi ephelele yenkokhiso ngayinye ngaphambi kokukhokhisa ikhadi lakho lesikweletu noma i-akhawunti ye-PayPal. UStanka uyavuma ukukhokha uMsebenzisi oSebenzayo inani elitholiwe, insizakalo encane, noma imali yokufaka, uma ikhona.
Ukugunyazwa Kwenkokhelo. Ngokwamukela le migomo, unikeza uStanka imvume yokukhokhisa ikhadi lakho lesikweletu esikwifayela, i-akhawunti yakwaPayPal, noma ezinye izindlela ezivumelekile zokukhokha imali ogunyazisa uStumari ukuthi ayenelise. Ngokuya ngemininingwane yakho ye-Bhida, uStayela angakujaja isikhathi esisodwa noma isisekelo esivela njalo. Ugunyaza iStumari ukuthi ikukhokhise inani eliphelele elikweletwa noma yimuphi Umsebenzisi Wokubonisana ngeSevisi, kanye nanoma iyiphi insizakalo esebenza nezimali ezisebenzayo. Ukuze ugweme ukungabaza, esimweni esithile endaweni ethile Umsebenzisi Wokubonisana usebenzisa kuphela amasevisi ukukuthumela nge-imeyili ukuthola izinsizakalo zezomthetho ngaphandle kwalezo ezingumbandela webhidi, ngokubeka ikhadi lakho lesikweletu noma i-akhawunti ye-PayPal kufayela eline-Stumari noma iprosesa lethu lokukhokha lesithathu, uyavuma futhi uyavuma ukuthi kuzosebenza imigomo yokukhokha ebalulwe kulesi Sigaba 12.
Isiqinisekiso sokukhokha esiqinisekisiwe soMsizi womsebenzisi. I-Stumari iqinisekisa ukukhokhwa kwe-invoice yomsebenzisi ngamunye eqinisekisiwe yokuqedwa kwemisebenzi (noma ingxenye yayo njengoba kwavunyelwana ngokubhala ngabathengi bezoMthetho kanye noMsebenzisi Wokubonisana) Kwabathengi Bezomthetho (iStumari's “limited Payment Guarantee”), ngokuya imigomo elandelayo nemibandela ("Imibandela yesiqinisekiso Sokukhokha Esinqunyelwe"):
I-Legal Client yehlulekile ukwanelisa i-invoice yoMhloli Oqinisekisiwe (inani le-dollar le-invoice, inani le- "Unpaid Invoised") ekupheleni kosuku lwekhalenda leshumi (10) ngemuva kokufakwa kwe-invoice (lolo suku, " Usuku Lokukhokhwa Kwekhasimende Okusemthethweni ”).
Umsebenzisi we-Verified Consultant uthumele ku-Stumari isimangalo esibhaliwe se-Anvoid Invoiced Amount (i) kungakapheli isikhathi sezinsuku zekhalenda ezingamashumi amabili nanye (21), eziqala ngosuku olulandela usuku lokukhokhwa kwamakhasimende asemthethweni (leso sikhathi, i- “Verified Isikhathi Sokuthumela Isimangalo Somsebenzisi Obonisanayo ”) kanye (ii) sinikeze ngemininingwane enengqondo ngamaqiniso nezimo zomsebenzi, kufaka phakathi noma yisiphi isizathu esinikezwe iKlayenti Lezomthetho ngokwehluleka kwakhe ukwenza leyo nkokhelo kanye / noma yisiphi isizathu ummeli angakusiza inkolo iqagela ukuthi kungani iklayenti lenqaba ukukhokha (leso simangalo, "Isicelo Sesiqinisekiso Sokukhokha Esinganiselwe"). Ukwehluleka ukuhambisa Isicelo Sesiqinisekiso Sokukhokha Okulinganiselwe ngaphakathi Kwesikhathi Sokungeniswa Kokufunwa Komsebenzisi Okuqinisekisiwe kuzokwenza lokho kuxolelwa unomphela koMsebenzisi Womxhumanisi kwelungelo lakhe lokuthola Inani Elikhokhiwe Elingakhokhiwe kunoma yimuphi umuntu noma inhlangano, kufaka phakathi uStumari neKlayenti Lezomthetho. Ngokwezinga lapho uStumari enquma khona ngokubona kwakhe okuphelele ukuthi kufanelekile yini ukwenza ezohwebo, angaqhubeka nemizamo yakhe yokuqoqa neKlayenti Lezomthetho futhi uma ephumelele, uMsebenzisi Oqinisekisiwe Womxhumanisi uzothola ingxenye yakhe yemali eqoqiwe, khipha noma yiziphi izindleko eziqoqiwe zokuqoqwa kwe-Stumari, ngokuya ku-12.e ngenhla.
Esimweni lapho Umsebenzisi Oqinisekisiwe ehambisa khona Isicelo Sesiqinisekiso Sokukhokha Esinganiselwe ngaphakathi Kwesikhathi Sokuthunyelwa Kommangali Oqinisekisiwe Somsebenzisi, futhi leso sicelo siqukethe imininingwane ebekwe esigatshaneni 14.b. ngenhla, uStumari uzozama ngokuthembeka ukusebenzisana noMsebenzisi weKlayenti Yezomthetho kanye Nomsebenzisi Obonisanayo oqinisekisiwe isikhathi esiyizinsuku ezingama-7 (XNUMX) zekhalenda kusukela osukwini lwesicelo se-Limited Payment Guarantee (leso sikhathi, i- “Matter-Related Disputed Matter” Isikhathi Sokulamula ”) ukuxazulula udaba oluyisihloko Sesicelo Esiqinisekisiwe Sokukhokha (i" Inkinga Ehlobene Nenkokhelo Ehlobene Nenkokhelo "). Esimweni lapho udaba oluphikisanayo olukhokhelwa yi-Payment luxazululwe ngempumelelo ngaphakathi kwesikhathi sokulamula esihlobene nenkokhelo, ngamunye weKlayenti Lezomthetho, Umsebenzisi Obonisanayo Oqinisekisiwe futhi, uma kufanele, uStumari uzothatha izinyathelo okuvunyelwene ngazo ukwenza okuvunyelwene ngakho isinqumo.
Esimweni lapho i-Matter Disputed Matter ehlobene nokukhokha ihlala ingaxazululiwe ekupheleni kweNkathi Yokulamula Ehlobene Nenkokhelo Ehlobene Nenkokhelo, kungakadluli usuku lwesikhombisa (7th) lwekhalenda ngemuva kokuphela Kwesikhathi Sokulamula Esihlobene Nenkokhelo (i usuku ukuzimisela okunjalo kuzokwaziswa ngokubhaliwe kwi-Legal Client and Verified User Consultant, i- "Stumari Disputed-Amount Determ Date Date"), uStumari uzokwenza isinqumo ngokubona kwakhe (i "Stumari Disputed Matter Decision"), ulwazi olunikezwe ngaphambili yi-Verified Consultant User futhi, uma lunikeziwe, iKlayenti Lezomthetho, lokuthi ngabe uhlobo nekhwalithi yezinsizakalo zomthetho ezinikezwe maqondana neJobe elihlobene ziyahambisana yini namazinga omkhakha, izinhlinzeko zeBhidi ehlobene nale Migomo Nemibandela. Uma kwenzeka uStumari ethatha isinqumo ngeNdaba Ephikisanayo Ehlobene Nenkokhelo esivuna Umsebenzisi Oqinisekisiwe Womxhumanisi, uStumari uzokhipha Imali Engakhokhiwe Engakhokhiwe Kumsebenzisi Oqinisekisiwe Wezeluleko kungakapheli izinsuku eziyisikhombisa (7) zekhalenda ngemuva kosuku lokunqunywa kwe-Stumari Disputed-Amount Determination, kanye noMsebenzisi Oqinisekisiwe Wokubonisana uzothathwa njengonikeze wonke amalungelo akhe maqondana neNdaba Ephikisana Nenkokhelo Ehlobene Nenkokhelo kuStumari. Ngaphandle kwanoma yini eshiwo lapha noma ngenye indlela ngokuphambene, inani ledola elifunwa ngaphansi kwalesi Sigaba 14 ngeke leqe inani elitholwe ekuqaleni phakathi kweKlayenti Lezomthetho kanye Nomsebenzisi Obonisanayo Oqinisekisiwe maqondana noJobe noma inani okuvunyelwene ngalo kamuva encwadini yokuzibandakanya esayiniwe noma enye into isivumelwano esibhaliwe phakathi kwamaqembu, futhi kunoma yisiphi isehlakalo asisoze seqa ama- $ 5,000 ngokuhlangene kuwo wonke ama-invoyisi angakhokhiwe athunyelwe yi-Verified Consultant User to the Legal Client.
Uma kwenzeka uStumari ethatha isinqumo ngodaba lwempikiswano oluhlobene nenkokhelo esivuna iklayenti lezomthetho, iklayenti lezomthetho ngeke lisabophezeleka ukuthi likhokhe inani elikhokhiwe elingakhokhiwe kumsebenzisi osebenzisiwe oqinisekisiwe futhi kuzothathwa njengokuthi linikeze wonke amalungelo alo maqondana nodaba oluphikisana nokukhokha oluhlobene nenkokhelo ku-Stumari kusukela ngosuku lokunqunywa kwe-Stumari Disputed-Amount. Esimweni esinjalo, Umsebenzisi Oqinisekisiwe Oqinisekisiwe (i) uzothathwa njengonqamule amalungelo akhe okufuna leyo mali kuKlayenti Lezomthetho, futhi (ii) unelungelo lokuqalisa inqubo ebophayo yokulamula maqondana neNani Elikhokhiwe Elingakhokhiwe ngokumelene I-Stumari elingana naleyo yenqubo ebekwe kusigaba 21.d. kwalokhu (Ukulamula) ngokunikeza uStumari isaziso esibhaliwe sokusebenzisa kwakhe lelo lungelo kungakapheli izinsuku eziyishumi (10) zekhalenda ngemuva kokuphela kosuku lokunqunywa kwe-Stumari Disputed-Amount Date (leyo nkathi, i- “Payment-Dispute Arbitration Election Time Period” ). Esimweni lapho uMsebenzisi we-Verified Consultant engasebenzisi ilungelo lakhe lokuqalisa inqubo yokulamula ngesikhathi Senkathi Yesikhathi Sokhetho Lokukhokhelwa Kwempikiswano, uzothathwa njengolishiye unomphela ilungelo lakhe lokukhokha Inani Elikhokhelwe Elingakhokhiwe.
Uma ngabe uStumari ezokwazi ukuthi ikhadi le-credit Client elisefayeleni, i-akhawunti ye-PayPal, noma ezinye izindlela zokukhokha ezigunyaziwe azisasebenzi, noma kufanele uStumari azi ukuthi iKlayenti elisemthethweni alikho, ngaphandle kwesizathu esivumelekile, alifuni noma alikwazi ukukhokha kwe-Jobe, noma enye i-Invoice kaJobe noma engakhokhelwa ku-Stumari, uStazela uzokwazisa lowo Msebenzisi / Abasebenzisi Bezomthetho abaqinisekisiwe benkampani / yabasebenzisi ngezinkinga ezingaba khona ezihlobene nokukhokha (lapha "ku-Isaziso"). Zonke izinsizakalo ezenziwa Umsebenzisi Oqinisekisiwe Wokubonisana ngaphambi Kwesaziso zingaphansi kokuthi "Isiqinisekiso Sokukhokha Okukhawulelwe," kepha kepha zonke izinsizakalo ezenziwa ngumsebenzisi oqinisekisiwe woMcebisi ngemuva kwesaziso ngeke zibe ngaphansi kokuthi "Isiqinisekiso Sokukhokha Esinqunyelwe." Uma ngabe Umsebenzisi Oqinisekisiwe Wokubonisana angenise i-invoice Kwikhasimende Lezomthetho lezinsizakalo ezenziwa ngemuva kwesaziso, uStumari usazokwenza imizamo yokuqoqa ukukhokha ngalezo zinsizakalo ezenziwe nguMsebenzisi oqinisekisiwe Wokubonisana.
Izinqubo Zomthengi Zokuxazulula Umthengi Zomthengi Eziqinisekisiwe Zomthengi. Esimweni lapho iKlayenti Lezomthetho linokholo oluhle lokuthi uhlobo noma ikhwalithi yezinsizakalo ezisemthethweni ezinikezwa ngumsebenzisi oqinisekisiwe weRejista maqondana neJobe efanelekile ayihambelani namazinga embonini noma izinhlinzeko zeBhidi ehlobene noma le mibandela Izimo, noma amanani afakwe kumisebenzi yezomthetho enikezwe uMsebenzisi Wokubonisana awahambelani nale Bhidi (leyo ndaba, “Into ehlobene Nezinsizakalo Ezihlobene Nezinsizakalo”), uvunyelwe ukuvimba ukukhokhiswa kwamanani aphikisiwe okuyi isihloko sendaba enjalo ("Ama-akhawuntwe wokukhokha imali)", ngokuya ngemibandela elandelayo nemibandela (“Imibandela Yezindleko Zokukhokhisa Engekho)”:
Kungakapheli izinsuku eziyishumi (10) zekhalenda zosuku lwe-invoyisi ehlobene (leyo nkathi, i- “Client Dispute Notice Period”), iKlayenti Lezomthetho lizonikeza iStumari isaziso esibhalwe ngokuningiliziwe ngamaqiniso nezimo okuyizisekelo Wendaba Yezimpikiswano Ehlobene Nensizakalo (ngayinye, “Isaziso Sezimpikiswano Ezihlobene Nensizakalo”). Ukwehluleka kweKlayenti Lezomthetho ukuletha Isaziso Sezingxabano Ezihlobene Nezinsizakalo ngaphakathi Kwesikhathi Sesaziso Sezimpikiswano Zamakhasimende Ezomthetho kuzodala ukunqatshelwa unomphela kweKlayenti Lezomthetho ilungelo lakhe lokuphikisana Nemali Yokukhokha Ebanjiwe, amanani azokhokhiswa kufayela leKlayenti Lezomthetho. ikhadi lesikweletu, i-akhawunti ye-PayPal, noma ezinye izindlela zokukhokha ezigunyaziwe ngokuya ngeSigaba 13.d. yale Migomo Yokusetshenziswa.
Uma kwenzeka ukuthi iKlayenti Lezomthetho lihambise Isaziso Sezingxabano Ezihlobene Nensizakalo ngaphakathi Kwesikhathi Sokwazisa Ngezimpikiswano Zomthetho, futhi leso sicelo siqukethe imininingwane ebekwe esigatshaneni 15.a. ngenhla, uStumari uzozama ngokuthembeka ukusebenzisana noMsebenzisi weKlayenti Yezomthetho kanye Nomsebenzisi Obonisanayo oqinisekisiwe isikhathi esiyizinsuku eziyishumi nanhlanu (15) zekhalenda kusukela osukwini lweSaziso Sezimpikiswano Ezihlobene Nensizakalo (leso sikhathi, i- “Disputed Related-Related Disputed Isikhathi Sokulamula Esibalulekile ”) ukuxazulula Indaba Esezimpikiswaneni Ehlobene Nezinsizakalo. Esimweni lapho i-Services-Related Disputed Matter ixazululwa ngempumelelo ngaphakathi kwe-Services-Related Disputed Matter Mediation Period, ngamunye we-Legal Client, i-Verified Consultant User futhi, uma kufanele, uStumari uzothatha izinyathelo okuvunyelwene ngazo ukwenza lokho okuvunyelwene ngakho isinqumo.
Esimweni lapho i-Services-Related Disputed Matter ihlala ingasonjululwanga ekupheleni kweNkathi Yokulamula Yezinkinga Ezihlobene Nensizakalo, kungakadluli usuku lwekhalenda lweshumi nane (14) ngemuva kokuphela Kwesikhathi Sokulamula Esiphikisanayo Esihlobene Nensizakalo, uStumari izothatha isinqumo sayo ngokubona kwayo okuphelele ("Isinqumo Sezindaba Zempikiswano Ehlobene Nezinsizakalo Zase-Stumari"), futhi ngokususelwa kulwazi olutholwe yi-Legal Client and Verified Consultant User, nokuthi uhlobo nekhwalithi yezinsizakalo zomthetho okuhlinzekwe maqondana neJob okuyisihloko se-Matter-Related Disputed Matter Yezinsizakalo bekuhambisana namazinga embonini, izinhlinzeko zeBhidi ehlobene nale Migomo Nemibandela. Uma kwenzeka uStumari ethatha isinqumo seNdaba Ephikisanayo Ehlobene Nezinsizakalo esivuna Umsebenzisi Oqinisekisiwe Womxhumanisi, iKlayenti Lezomthetho lizobophezeleka ukuthi likhokhe Imali Ebanjelwe Yokukhokha kulowo Msebenzisi Oxhumene naye zingakapheli izinsuku eziyisikhombisa (7) zekhalenda ngemuva kosuku lelo IKlayenti Lezomthetho laziswa ngokubhala ngesinqumo se-Stumari Services-Related Disputed Matter Decision (“Isaziso Sesinqumo Sesinqumo Sezindaba Zase-Stumari Services”). Esimweni lapho iKlayenti Lezomthetho lehluleka ukukhokha ngesikhathi, uStumari uzothumela Imali Ebanjelwe Yokukhokha Kumsebenzisi Oqinisekisiwe Ozonikeza amalungelo akhe okubuyisela leyo mali kuStumari okungase, ngokubona kwayo, kusebenze ukukhokha ngokulandela kuya kusigaba 13.d kanye / noma bakhethe ukulandela amalungelo nezisombululo zabo ngokumelene neKlayenti Lezomthetho.
Uma kwenzeka uStumari ethatha isinqumo seNdaba Ephikisanayo Ehlobene Nensizakalo evuna iKlayenti Lezomthetho, iKlayenti Lezomthetho ngeke lisabophezeleka ukuthi likhokhe Amanani Okukhokha Agodliwe Kumsebenzisi Oqinisekisiwe Womxhumanisi futhi kuzothathwa njengokuthi linikeze wonke amalungelo alo. maqondana nodaba oluphikisana nezinsizakalo oluya eStumari. Esimweni esinjalo, uMsebenzisi Oqinisekisiwe Obonisanayo (i) uzothathwa njengonqamule amalungelo akhe okufuna leyo mali kuKlayenti Lezomthetho, futhi (ii) unelungelo lokuqalisa inqubo ebophayo yokulamula maqondana Nemali ekhokhwayo ebanjiwe ngokumelene I-Stumari elingana naleso senzo esivezwe kusigaba 21.d. kwalokhu (Ukulamula) ngokunikeza uStumari isaziso esibhaliwe sokusebenzisa kwakhe lelo lungelo kungakapheli izinsuku eziyishumi (10) zekhalenda ngemuva kosuku lweSaziso Sesinqumo Sesinqumo Sezinsizakalo Ezihlobene Nensizakalo (isikhathi esinjalo, i- “Services-Related Arbitration Election Time Period ”). Esimweni lapho Umsebenzisi Oqinisekisiwe engasebenzisi ilungelo lakhe lokuqalisa inqubo yokulamula phakathi nesikhathi Sesikhathi Sokhetho Esihlobene Nensizakalo, uzothathwa njengolikhiphe unomphela ilungelo lakhe lokukhokha Izimali Zokukhokha Ezigodliwe .
Esimweni lapho Umsebenzisi Oqinisekisiwe Wokubonisana kanye NeKhasimende Lezomthetho sebezitholile ngasikhathi sinye ilungelo elivezwe eSigabeni 14 nakuSigaba 15, izinqubo ezibekwe eSigabeni 15 zizolandelela inqubo eqhubekayo ebekwe eSigabeni 14 noMsebenzisi oqinisekisiwe Umeluleki uvuma ukukhipha ilungelo lakhe unomphela ilungelo lakhe lokuphishekela amalungelo akhe abekwe eSigabeni 13 maqondana namaqiniso kanye nezimo ezilandelwa yi-Payment-Related Disputed Matter.Izinqubo ezishiwo kulesi Sigaba 15 zizobhekiswa lapha njengendlela "Izinqubo Zokuxazulula Izinkinga Ezihlukile".
Ukuziphendulela kweziqinisekiso. Sinikeza insizakalo yethu njengoba injalo, futhi asenzi izithembiso noma isiqinisekiso mayelana nale sevisi. Sicela ufunde lesi sigaba ngokucophelela; kufanele uqonde okufanele ukwenze.
I-Stumari inikela ngeWebhusayithi kanye nesevisi "njengoba injalo," ngaphandle kwesiqinisekiso sanoma iluphi uhlobo. Ngaphandle kokunciphisa umkhawulo owandulelayo, uStumari uzikhipha ngokusobala zonke iziqinisekiso, noma ngabe ziveza, ziveziwe noma zimi ngokomthetho, ngokuqondene newebhusayithi kanye nensizakalo kufaka, ngaphandle komkhawulo, noma iyiphi incwadiwaranti yokuthengisa, ukuqina kwenhloso ethile, isihloko, ukuphepha, ukunemba kanye nokungaphuli.
Ngokucacile, uStumari akenzi ukumelwa noma iwaranti yokuthi imininingwane esiyinikezayo noma enikezwe ngeSeva inembe, ithembekile noma ilungile; ukuthi Insizakalo izofinyelela izidingo zakho; ukuthi Insizakalo izotholakala nganoma yisiphi isikhathi noma indawo, ukuthi Insizakalo izosebenza ngendlela engaphazanyiswa noma iphephe; ukuthi noma yikuphi ukushiyeka noma amaphutha azolungiswa; noma ukuthi insizakalo ayinama-virus noma ezinye izinto eziyingozi. Uthatha umthwalo ophelele kanye nengozi yokulahleka okuvela ekusebenziseni kwakho imininingwane, okuqukethwe noma okunye okutholakale kwisevisi. Ezinye izindawo zilinganiselwe noma azivumeli ukuthi kukhululwe i-waranti, ngakho-ke leli lungiselelo kungenzeka lingasebenzi kuwe.
Ukunciphisa kweMfanelo. Ngeke sibe nesikweletu somonakalo noma ukulahleka okuvela ekusebenziseni kwakho insizakalo noma okuvela ngaphansi kwalesi Sivumelwano. Sicela ufunde lesi sigaba ngokucophelela; kukhawulela izibopho zethu kuwe.
Ngokwezinga elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, akukho senzakalo lapho iStagei sizobekwa kuwe icala ngokulahleka kwemali yenzuzo, ukusetshenziswa, noma idatha, noma ngabe yikuphi ukulimala okwenzekile, okungaqondile, okubalulekile, okubonakalayo noma okuyisibonelo, noma ngabe kuvela, i ) ukusetshenziswa, ukudalulwa, noma ukukhonjiswa kokuqukethwe okukhiqizwe ngumsebenzisi; (ii) ukusetshenziswa kwakho noma ukungakwazi ukusebenzisa Insiza; (iii) Insizakalo ngokuvamile noma isoftware noma amasistimu enza ukuthi Insiza itholakale; noma (iv) noma yikuphi okunye ukusebenzisana noStazela noma omunye uMsebenzisi Wesevisi, noma ngabe kususelwa kuwaranti, inkontileka, i-tort (kufaka phakathi ukunganaki) noma enye inkolelo-mbono engokomthetho, nokuthi ngabe noma ngabe u-Stumari uye waziswa ngokwenzekile kulowo monakalo, futhi noma ngabe ikhambi eliveziwe kulesi Sivumelwano litholakala lihlulekile kwinhloso yalo ebalulekile. I-Stumari ngeke ibe nesikweletu kunoma yikuphi ukwehluleka noma ukubambezeleka ngenxa yezindaba ezingaphezu kokulawula kwethu okunengqondo. Ezinye izinkantolo zikhawulelwe noma azivumeli ukuthi bakhiphe isitatimende sesikweletu, ngakho-ke lokhu kulungiselelwa kungenzeka kungasebenzi kuwe.
Abaxhamli beqembu lesithathu. Abasebenzisi Bokubonisana bahloselwe abazuzi abavela eceleni balesi sigaba Semigomo Yokusebenzisa. Noma yiluphi ulwazi lwezomthetho olunikezwe kulo Mnyango olwenzelwe ulwazi kuphela. I-Stumari nanoma imuphi umdali wokuqukethwe okukhiqizwa umsebenzisi okuqukethe imininingwane yezomthetho kuyazilahla zonke iziqinisekiso, noma zivezwe noma zishiwo, zomthetho noma okunye, kufaka phakathi kepha kungakhawulelwe kumawaranti ashiwo wokuthengiselana, ukungaphuli umthetho wamalungelo wezinkampani zangaphandle, nokuqina ngenhloso ethile , ngezinga eligcwele elivunyelwe umthetho. Akunakwenzeka ukuthi uStumari noma uMsebenzisi Obonisanayo babophezeleke kunoma imuphi umonakalo (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukulimala okuvelayo kanye nokulandelanayo, ukulimala komuntu / ukufa okungafanele, inzuzo elahlekile, noma ukulimala okubangelwa idatha elahlekile noma ukuphazanyiswa kwebhizinisi) okuvela ekusetshenzisweni noma ukwehluleka ukusebenzisa i-Service noma okuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi, noma ngabe kususelwa kuwaranti, inkontileka, ukuhlukunyezwa, noma enye imfundisoze yezomthetho, nokuthi ngabe uStumari noma abanikeli bokuqukethwe okwenziwe ngumsebenzisi bayaxwayiswa ngamathuba omonakalo onjalo. Akekho uStumari noma abanikeli bokuqukethwe okwenziwe umsebenzisi abanesibopho sokulimala komuntu siqu, okubandakanya ukufa, okubangelwa ukusebenzisa kwakho noma ukusebenzisa kabi isevisi noma okuqukethwe okwenziwe umsebenzisi.
Uyavuma ukukhipha isikweletu futhi ungabambi i-Stumari engenabungozi kunoma yikuphi ukumangalelwa kanye nezindleko, kufaka phakathi izindleko zommeli, okuvela ekusebenziseni kwakho Iwebhusayithi kanye nensizakalo, kufaka phakathi kodwa kungagcini lapho wephula lesi Sivumelwano.
Uma unengxabano noMsebenzisi oyedwa noma abaningi, udedela uStumari kwizimangalo, izimfuno kanye nomonakalo (wangempela nomphumela) wazo zonke izinhlobo nezinhlobo, ezaziwayo nezingaziwa, ezivela noma nganoma iyiphi indlela exhunywe nezimpikiswano ezinjalo. Uma ungumhlali waseCalifornia, uhola i-California Civil Code §1542, ethi: "Ukukhishwa okujwayelekile akudluleli ezimangweni umuntu okweletwayo angazi noma asola ukuthi ukhona esikhundleni sakhe ngesikhathi sokukhipha, okuthi uma owaziwa nguye kumele ukuthi uthinte indawo yakhe yokuhlala nomuntu okweletayo. ”
Ukuguqulwa kwemigomo yokusetshenziswa. UStumari angasichibiyela lesi Sivumelwano ngezikhathi ezithile, futhi ngokubona kukaStumari kuphela. Sizonikeza isaziso kubasebenzisi bezinguquko ezibonakalayo kulesi Sivumelwano (i) ngokuthumela isaziso kukheli le-imeyili eliyinhloko elichazwe ku-akhawunti yakho, elizosebenza ngokushesha lapho sithumela le imeyili, kanye / noma (ii) ngeWebhusayithi yethu okungenani izinsuku ezingama-30 ngaphambi kokuba ushintsho luqale ngokuthumela isaziso ekhasini lethu lasekhaya. Izinguquko okungezona ezibonakalayo kulesi Sivumelwano zizosebenza ngokushesha. Sikhuthaza izivakashi ukuthi zivame ukuhlola leli khasi ukuthola noma yiziphi izinguquko kulesi Sivumelwano. Ukusetshenziswa kwakho okuqhubekayo kwensizakalo ngemuva kosuku lokuqala ukusebenza kwenguqulo ebukeziwe yalesi Sivumelwano kusho ukwamukela kwakho imigomo yaso.
Okuxubile. Lesi Sivumelwano silawulwa ngumthetho waseCalifornia. Wena, wena wedwa, unesibopho kunoma yiziphi izibopho ovumelana nazo ngaphansi kwalesi sivumelwano. Uma sibandakanyeka ekuhlanganeni noma sithengiwe, singasidlulisa lesi Sivumelwano, inqobo nje lapho amalungelo akho evikelwe. Ungavuma kuphela ngale migomo uma ukwazi ukwenza isivumelwano esibophayo esifundazweni sakho. Lawa magama, okubandakanya inqubomgomo yethu Yobumfihlo, yisivumelwano esiphelele phakathi kwethu, futhi ayikho eminye imigomo esebenza.
Umthetho Ophethe. Ngaphandle kokuthi umthetho osetshenziswayo uhlinzeka ngenye indlela, lesi Sivumelwano phakathi kwakho neStzera futhi ukufinyelela noma ukusetshenziswa kweWebhusayithi noma Insizakalo kulawulwa yimithetho yenhlangano yase-United States of America nemithetho Yezwe laseCalifornia, ngaphandle kokubheka ezingqubuzaneni nemibandela yomthetho. Wena noStumari nivumela ukuhambisa amandla kanye nezindawo zezinkantolo eziseDolobheni naseSan Francisco, eCalifornia, ngaphandle kwalapho kunikezwe khona ngaphansi kwalesi Sivumelwano.
Ukwehluleka. Uma noma iyiphi ingxenye yalesi Sivumelwano ibanjwa ingasebenzi noma ingaphoqeleleki, leyo ngxenye yesivumelwano izothathwa ukukhombisa izinhloso zokuqala zeqembu. Izingxenye ezisele zizohlala zisebenza ngokuphelele nomphumela. Noma yikuphi ukwehluleka engxenyeni yeStanka yokuphoqelela noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalesi Sivumelwano ngeke kuthathwe njengokuwephuca ilungelo lethu lokuphoqelela lokho kunikezwa. Amalungelo ethu ngaphansi kwalesi Sivumelwano azosinda kunoma yikuphi ukunqanyulwa kwalesi Sivumelwano.
Umkhawulo weThemu Lokusebenza. Uyavuma ukuthi noma iyiphi imbangela yesenzo ehlobene noma ivela ebudlelwaneni bakho neStumari kumele iqale kungakapheli unyaka OYODWA ngemuva kwembangela yokuqongelelwa isenzo. Ngaphandle kwalokho, imbangela enjalo yesenzo ivinjelwe unomphela.
Ukulamula. Uma kungqubuka ingxabano phakathi kwakho noStumari, singathanda ukukunikeza izindlela ezingathathi hlangothi futhi ezingabizi zokuxazulula impikiswano ngokushesha. Ngakho-ke, sanoma yisiphi isimangalo (ngaphandle kwezicelo zokubuyiselwa kokulimaza noma zokulingana noma izimangalo eziphathelene namalungelo empahla yamalungelo obunikazi) ngaphansi kwalesi Sivumelwano, noma yiliphi iqembu lingakhetha ukuxazulula noma iyiphi ingxabano evelayo ngaphansi kwalesi Sivumelwano ngokubopha ukulamula okungasekeli ukubukeka. Iqembu elikhetha ukulamula kufanele liyisungule ngokusetshenziselwa enye indlela yokuxazulula izingxabano (“ADR”) okuvunyelenwe ngayo amaqembu. Umhlinzeki we-ADR kanye nezinhlaka kufanele bahambisane nale mithetho elandelayo: (a) ukulamula kuzoqhutshwa, ngokuzikhethela kweqembu elifuna usizo, ngocingo, online, noma ngokusekelwe ekuthumeleni okubhaliwe kuphela; (b) ukulamula ngeke kuhilele ukubonakala komuntu maqembu noma ofakazi ngaphandle kokuthi kuvunyelwe ngenye indlela izinhlangothi lezo; futhi (c) noma yisiphi isahlulelo emiklomelweni enikezwe umlamuli singafakwa kunoma iyiphi inkantolo yomthetho onekhono.
Ukungabelani. I-Stumari inganikeza noma idlulisele le migomo yokusetshenziswa kanye / noma nenqubomgomo yobumfihlo ye-Stumari, iphelele noma ingxenye, kunoma yimuphi umuntu noma ibhizinisi nganoma yisiphi isikhathi ngemvume noma ngaphandle kwemvume yakho. Awukwazi ukwabela noma ukudlulisa noma yimaphi amalungelo noma izibopho ngaphansi kwemigomo yokusebenzisa noma inqubomgomo yobumfihlo ngaphandle kwemvume ebhaliwe yangaphambilini yeStumari, futhi noma yikuphi ukunikezwa okungagunyaziwe nokunikezwa nguwe akusize.
Izihloko Zengxenye Nezifinyezo Ezingabophisi. Kulesi Sivumelwano sonke, isigaba ngasinye sifaka izihloko nezifingqo ezifushane zale migomo nemibandela elandelayo. Lezi zihloko zezigaba nezifingqo ezimfushane azihambisani ngokusemthethweni.
Isivumelwano esiphelele. Le migomo yokusetshenziswa, kanye nenqubomgomo yobumfihlo ku-https: //www.Stumari.com/privacypolicy, amele isitatimende esiphelele nesisodwa sesivumelwano phakathi kwakho noStumari. Lesi Sivumelwano sidlulisa noma yisiphi isiphakamiso noma isivumelwano sangaphambilini ngomlomo noma esilotshwe, kanye nanoma yikuphi okunye ukuxhumana phakathi kwakho neStumari mayelana nodaba lwalesi Sivumelwano. Lesi Sivumelwano singaguqulwa kuphela ngokuchitshiyelwa okubhaliwe okusayinwe yisiphathimandla esigunyaziwe seStage, noma ngokuthumela ngo-Stumari yenguqulo ebukeziwe.
Ukugunyazwa kwinkontileka. Ubonisa futhi uqinisekisa ukuthi uma ungumuntu, uneminyaka yobudala esemthethweni ukwakha inkontileka yokubopha; noma ukuthi uma ubhalisa egameni lebhizinisi, ogunyaziwe ukungena kulo, bese ubopha ibhizinisi, kule migomo yokusebenzisa futhi ubhalisela insizakalo.
Uyavuma ukuthi ufunde le mibandela yokusetshenziswa, uqonde imigomo yokusetshenziswa, futhi uzoboshwa yile migomo nemibandela.